Xulka qaranka Turkiga oo salaantan lagu heysto. - NorSom News
Xulka qaranka Turkiga oo salaantan lagu heysto.
Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Yurub ee magaciisa loo soo gaabiyo Uefa ayaa baaritaan ku sameyn doona salaan milatari oo ay bixiyeen ciyaartoyda xylka qaranka Turkiga, ka dib markii xiddiga u ciyaara kooxda Everton, Cenk Tosun, uu dhaliyay goolkii guusha ee ciyaartii ay la yeesheen xulka Albania.
Turkiga ayaa Jimcadii 1-0 uga adkaafay Albania, xilli uu socdo dagaalka Waqooyiga Suuriga ku dhexmaraya ciidamada Turkiga iyo xoogagga Kurdiyiinta.
Tosun ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawirka salaanta milatariga, wuxuuna ku soo qoray: “Waxaan ugu talagalnay qarankeenna, gaar ahaan kuwa naftooda halista u galiyay qarankeenna dartiis”.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub ayaan oggoleyn in ciyaarahooda lagu lifaaqo arrimo siyaasadeed.
Guusha ugu dambeysay ayaa Turkiga u suurtagalisay inay booska ugu sarreeya uga jiraan xulalka la isku aaddiyay ee u loollamaya ka qeyb galka ciyaaraha Euro 2020.
Maalintii Arbacada ayey howlgal milatari oo aad u weyn, kaasoo ay ka wadaan deegaannada Waqooyiga Suuriya ee ay gacanta ku hayaan xoogagga ay Kurdiyiinta hoggaamiyaan ee Suuriga, oo magacooda loosoo gaabiyo (SDF).
Tobannaan qof oo rayid ah iyo ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeda ayaa lagu dilay dagaalkaas, oo wali socda.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Turkiga ayaa iyaguna Instagram-ka soo dhigay sawirka ciyaartoyda Turkiga iyo tababareyaal salaan milatari saaraya oo ku jira qolka labiska, waxayna soo raaciyeen farriin ay ku leeyihiin: “Meesha aan ku soconno waa horyaalnimada! Toddobo ciyaarood ka dib waxaan hoggaamineynaa horinta H ee ku loollameysa isree-reebka tartanka qaramada qaaradda Yurubub. Guushan waxaan siineynaa ciidamadeenna geesiyaasha ah”.
Afhayeen u hadlay xiriirka Uefa oo lagu magacaabo Philip Townsend ayaa wakaaladda wararka Talyaaniga ee Ansa u sheegay in Salaanta ciyaartoyda Turkiga “ay u muuqan karto arrin laga caroodo”.
“Waxaan damaanad qaad u bixin karaa inaan baaritaan ku sameyn doonno”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Previous articleMaxmada Oslo oo diiday codsiga hooyo Daacish katirsaneyd oo codsatay in la xiro.
Next articleAdeegsiga waraaqihii hore ee 50-ka iyo 500 oo beri joogsan doono.
Dowlada Hoose-Oslo: 10 qof wax ka badan hal meel ma wada joogi karaan.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (35) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)